ဝတ္ထုတို တစ်ပုဒ် ဖြစ်မလား လို့ ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဝတ္ထုတို တစ်ပုဒ် ဖြစ်မလား လို့ ပါ
ဝတ္ထုတို တစ်ပုဒ် ဖြစ်မလား လို့ ပါ
Posted by မောင် ပေ on Jul 15, 2011 in Creative Writing, Short Story |4comments
ဝတ္ထု တို တစ်ပုဒ် ဖြစ်မလား
M သည် အသက် ၃၀ ကျော် လူပျိုကြီး တစ်ယောက် ဖြစ်သည် ။ သူ ၏ အလုပ် မှာ တရုတ်ပြည် မှ မန်းတလေး သို့ လျှပ်စစ် ပစ္စည်း တင်သွင်းသည် ။ M အနေ ဖြင့် အချိန်တိုင်း အလုပ် လုပ်စရာ မလိုပေ ။ သူ့ တွင် ရောင်းစရာ ကုန်ပစ္စည်း ကုန်ခါနီး ဆိုလျှင် တရုတ်ပြည်ရှိ စက်ရုံ သို့အမှာ ပါးလိုက်သည် ။ ရံဖန်ရံခါ ဈေးကွက်အတွင်း သို့ အခြားနိုင်ငံများ(ဥပမာ ယိုးဒယား ၊ ဂျပန် အစရှိသဖြင့် ) ထုတ် ကုန်ပစ္စည်း အသစ် တစ်မျိုး ဝင်လာခဲ့ လျှင် ထိုပစ္စည်း ကို အသေးစိတ် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး စက်ရုံမေးလ် သို့ ပို့ ပေးလိုက်ရုံသာ ။ M လိုချင်သည့် ပုံစံ အတိုင်း ကို စက်ရုံမှ အနီးစပ်ဆုံး ထုတ်ပေးပြီး နယ်စပ် ကြယ်ခေါင် သို့ အရောက်ပို့ ပေးသည် ။ကြယ်ခေါင် ရှိ M ၏ အဆက်အသွယ် ဆီ မှာထားသော ပစ္စည်း များ ရောက်လာပြီ ဆို မှ ဒီဘက် မှ ငွေလှမ်းလွှဲ ပေးလိုက်ရုံ ပင် ။ ပစ္စည်း များကို ကြယ်ခေါင် ရှိ M ၏ အဆက်အသွယ် မှ စစ်ဆေးပေးသည် ။ များသော အားဖြင့် M ကိုယ်တိုင် ကြယ်ခေါင် သို့ သွားရောက် စစ်ဆေးသည် ။ M အနေ ဖြင့် ကြယ်ခေါင် မှ မန်းတလေး သို့ ပစ္စည်း အရောက် သယ်ယူပို့ ဆောင် ပေးရန် “ ကယ်ရီ ” လက် အပ်လိုက်ရုံပင် ။ မန်းတလေး သို့ ကုန်ပစ္စည်း များ ရောက်လာပြီ ဆိုလျှင် လည်း သိပ် အလုပ် မရှုပ် ။ မန်းတလေး ရှိ ကုန်သည်ကြီး များ ကို အကြောင်းကြား ပြီး အမှာတက်သူ များထံ ပစ္စည်း ပို့ ထားရုံ ပင် ။ အကြွေးသဘောမျိုး ပေါ့ ။ သို့ သော် နေ့ စဉ် ပိုက်ဆံ လိုက်လံ ကောက်ရသည် ။ ထိုအလုပ် ကို M ၏ ယုံကြည်စိတ်ချ ရသော လူရုံ တစ်ယောက် က လိုက်ကောက်ပေးသည် ။နယ်အမှာ များ ကို မူ ငွေလှမ်းလွှဲ ခိုင်း လိုက်ပြီး ငွေလွှဲ ဝင် မှ ပို့ ပေးရုံ ပင် ။ M အနေ ဖြင့် တစ်ပါတ် တစ်ရက် လောက်သာ ဈေးကွက် ထဲ သို့ လိုက်လံ ကွင်းဆင်း လေ့လာရုံဖြင့် အလုပ် ပြီးသည် ။ M သည် အသက် ၃၀ ကျော် ဆိုသော်လည်း ဆယ်ကျော်သက် တစ်ဦး ပမာ ဝတ်ဆင် သွားလာ နေထိုင်လေ့ ရှိသည် ။
AA သည် အိမ်သုံးကုန် ပစ္စည်း မျိုးစုံ ဖြန့် ချီ ရောင်းဝယ်သော လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကြီး တစ်ယောက် ခန့် ဖြစ်သည် ။ AA တွင် BB ဆိုသော ဇနီး နှင့် CC ဆိုသော သမီးလေး တစ်ယောက် ရှိသည် ။ AA နှင့် M တို့ သည် စီးပွားအတူ လုပ်ကိုင်လာကြသည် မှာ ကြာပြီ ။ ခင်မင်ရင်းနှီးကြသူ များ ဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်အိမ် တစ်ယောက် ဝင်ထွက်စားသောက်နေကြသည့် မိတ်ဆွေ များ ဖြစ်ကြသည် ။ CC သည် M မျက်စိရှေ့ တွင်ပင် ကြီးပြင်းလာခဲ့သည် ။ CC လေးသည် စာတော်သည် ။ စာကြိုးစားသည် ။ ရုပ်ရည်လေး က လှပသည် ။ CC ၁၀တန်း အောင်ပြီးတွင် မန်းတလေး တွင် ၂ နှစ်ခန့် သာ GCE , Tofel စသည့် သင်တန်းများ တက်ပြီး စင်ကာပူ ရှိ NUS ကျောင်း သို့ ပညာ သွားသင်ရသည် ။ AA တို့ ဇနီးမောင်နှံသည် ငယ်စဉ်က ပညာ မသင်ခဲ့ရပေ ။ ကြိုးစားခဲ့သဖြင့် အခြေအနေ တစ်ခု သို့ ရောက်ခဲ့သည် ။ အများနည်းတူ သမီးလေး ကို စင်ကာပူ တွင် ပညာသင်ကြားစေချင်သည် ။ ယနေ့ ခေတ် တွင် စီးပွားရေး ကျဆင်းနေသော်လည်း သမီးဖြစ်သူ အား မသိစေပဲ စင်ကာပူ သို့လွှတ် ၊ ပညာ သင်ပေးသည် ။ CC သည် ၁၀ တန်း အပြီး သင်တန်းများ တက် စဉ် အပေါင်းအသင်း သစ် များစွာ ရရှိခဲ့သည် ။ ပိုက်ဆံ တတ်နိုင်သော မိသားစု များ မှ ပေါက်ဖွားလာသည့် ရဲတင်းလွန်းသော လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ နေတတ်သော သူငယ်ချင်း သစ် များစွာ နှင့် အတူ ပညာသင် ပျော်ပါး ခဲ့သည် ။ လှပသော CC ဆိုသည့် ပန်းပွင့်လေး နားတွင် လိပ်ပြာလေးများ ဝဲနေခဲ့သည် ။ ရင်ခုန်သံ ကို စမ်းသပ် ခဲ့သူ CC တွင် လည်း ရင်ခုန်စရာ ဇါတ်လမ်းလေး များ တွေ့ ကြုံ ခဲ့သည် ။ စီးပွားကိုသာ ဇောက်ချ ရှာဖွေနေသူ AA တို့ မိဘ နှစ်ဦး သည် CC ကို အသေးစိတ် လိုက်လံ မထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပေ ။ သို့ နှင့် CC သည် ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များကို ကြိုက်နှစ်သက်သော ၊ ငွေသုံး လက်ဖွာသော ၊ အပျော်အပါးကို မက်မောသော ခေတ် သမီးပျိုလေး တစ်ယောက် အနေဖြင့် စင်ကာပူ သို့ သွားရောက် ကျောင်းတက်သည် ။
၂၀၀၉ သည် အများသူငှာ အတွက် တော့ မသိ ။ M အတွက်တော့ စီးပွား အထူးကောင်းမွန်ခဲ့သော နှစ် တစ်နှစ်ဖြစ်သည် ။ M တင်ကြို တွက်ချက် ခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်း သည် ဈေးကွက် အတွင်း ပေါက်ခဲ့သဖြင့် M အနေ ဖြင့် အမြတ်ကြီး မြတ်လိုက်သည် ။ စီးပွားကျ နေသူ AA ကို ပင် M က ငွေရေးကြေးရေး အကူအညီ ပေးခဲ့သည် ။ AA တစ်ယောက် မှာ စီးပွား ကျဆင်းရသည့် ကြား ထဲ စင်ကာပူ ရှိ သမီးလုပ်သူ က အကြောင်းမျိုးစုံ ပြ ကာ ခဏခဏ ငွေလွှဲ ခိုင်းလာသဖြင့် ဖတ်ဖတ် ကို မောနေသည် ။
“ CC က စာတော် တာပဲ ဗျာ ။ ကလေးမ လေး က ကြိုးစားပါတယ် ၊ အခု ဟာ က ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ ဗျ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လက မှ ခင်ဗျား အရေးကြီး တယ် ဆိုလို့ သိန်း ၁၀၀ လှည့်ပေးထားသေးတယ်လေ ”
“ ငယ်တုန်းက တော့ ဘယ်စာမေးပွဲ မှ မကျခဲ့ ဖူးပါဘူး ကွာ ၊ အခု ဟိုရောက်မှ စာမေးပွဲ က လဲ ခဏခဏ ကျ လိုက်ရတာ ၊ စာမေးပွဲ ကြေး ဆိုတာ ကလည်း ခဏခဏ သွင်းလိုက်ရတာ အမော ပဲ ၊အင်းကျီ တွေ ဖုန်းတွေ က လည်း ဝယ်လိုက်ရတာ ကွာ ။ အခု လည်း ဒီတစ်ပတ် အတွင်း ငွေအကြေ သွင်းရမယ် ဆိုလာလို့ ပါ M ရယ် ။ အရေးထဲ မိန်းမ က ဒီတစ်ပတ် အပိုင်ဆိုပြီး ချဲ ကို အချီကြီး ထိုးချ လိုက်တာ အခု ရှင်းရတော့ မှာ မို့ ပါ ၊ စိတ်ချပါကွာ မင်းပိုက်ဆံ တွေ ကို ငါတို့ ဆီ စုထားတယ် လို့ ပဲ သဘောထားလိုက်ပါ ။ ငါတို့ မလဲ မင်းဆီက အကူအညီ ရလို့ သာ သမီးလေး ကို ငွေပို့ ပေးနိုင်နေတာပါကွာ ။ မင်းဟာ တို့ မိသားစု အတွက် ကျေးဇူးရှင်ပါ ”
“ ပိုက်ဆံ က အကြောင်း မဟုတ်ပါဘူး ကို AA ရယ် ။ အခုဟာ က CC လေး အတွက် စိတ်ပူ လို့ ပါ ၊ သူ လိမ္မာ မှ ခင်ဗျား တို့ နောက်ပိုင်း စိတ်အေး ရမှာ မလား ၊ ထားပါ ။ ကျုပ် ကို တရုတ်ပြည် စက်ရုံ သူဌေး တွေ က ဒီအာရှထဲ အလည်အပတ် ပို့ ပေးမယ် လို့ ပြောထားတာ ၊ အဲဒါ သွားဖို့ ပြင်ရဦးမယ် ”
“ အင်းအင်း ၊ ဒါဆို မင်းအနေ နဲ့ တော့ နိုင်ငံစုံ စားရိတ်ငြိမ်း သွားကဲ ရဦးမှာပေါ့လေ ။ အားကျပါပေ့ ကွယ် ”
M တစ်ယောက် ထိုင်း နိုင်ငံ ရှိ အလည်သွားစရာ နေရာများ ကို အွန်လိုင်းတွင် ကြည့်ရှူ ရန် ဂူးဂဲ ကို ဖွင့်ပြီး သူ ၏ ဖေ့ဘုတ် အကောင့် ကို ဖွင့်လိုက်သည် ။ ဖေ့ဘုတ် ထဲ တွင် ဝင်ဝင်ချင်း စာမျက်နှာ ကို ကြည့်လိုက်တော့ စင်္ကာပူ မော်ဒယ်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော မြန်မာမ လေး များ ပုံများကို တွေ့ လိုက်ရသည် ။ M ၏ ဖေ့ဘုတ် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် က tag လုပ်ထားသော ပုံများ ဖြစ်သဖြင့် M ၏ ဖေ့ဘုတ် အကောင့်တွင်ပါ မြင်နေရသည် ။ မိန်းကလေး များ အားလုံးသည် ကျောင်းသူ အရွယ်လေးများ သာ ။ ဝတ်ထားကြသည် မှာ လည်း တစ်ကယ့်နေရာများကို ဖုံးထားရုံ လေး ။
“ အင်း ဒီကောင်မလေး တွေ တော့ နာမည်ကြီးဦးမှာပါပဲလေ ….. ။ မင်းတို့ လေးတွေ က ဒီလို ရိုက်တော့ လည်း ငါ က သေချာ အသေးစိတ်ကြည့်ရသေးတာပေါ့ကွာ ” ဟု မာန်တင်းပြီး တစ်ပုံချင်းစီ ကို အသေးစိတ် မျက်စိ အရသာခံ လိုက်ကြည့်နေမိသည် ။ ပုံများ ကို လိုက်ကြည့်နေရင်း ပုံတစ်ပုံ အရောက်တွင် M အကြီးအကျယ် အံ့သြ သွားသည် ။ ကောင်မလေး က အပေါ်ပိုင်း ဘာမှ ဝတ်မထား ။ အောက်ကလည်း အောက်ခံဘောင်းဘီ လို့ ခေါ်တာမျိုး ပဲ ပါသည် ။ ကျောပေးရိုက်ထားသည် ။ “ အင်း..သူလေး က တော်တော် ရဲတာပါကလား ” ဟု သတ်မှတ်ချက်ပေးရင်း ၊ နောက်တစ်ပုံ ထပ်ကြည့်တော့ ။ ဘေးတိုက် ရိုက်ပြထားသည် ။ ဒီပုံတွင် ကောင်မလေး ၏ မျက်နှာဘေး တိုက် တစ်ခြမ်း ပါလာသည် ။ M တစ်ယောက် ဘုရားရေ ဟု အော်မိကာ စိတ်နှလုံး ခြောက်ခြားသွားသည် ။ မျက်နှာကို ဘေးတိုက် ရိုက်ထားသူလေး မှာ သေချာကြည့်လိုက်တော့ ကိုAA တို့ ၏ သမီးလေး CC နှင့် ရုပ်ချင်း ဆင်နေသည် ။
“ သူ မဖြစ်ပါစေ နဲ့၊ အို မဟုတ်နိုင်ပါဘူး လေ ၊ CC ကလေး က လိမ္မာပါတယ် မဖြစ်လောက်ပါဘူး ။ ငါ ကိုယ်က စိတ်စွဲ နေလို့ နေမှာပါ ” ဟု ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ပြန်နှစ်သိမ့်ရင်း ဖေ့ဘုတ် အကောင့်မှ ထွက်လိုက်သည် ။ စိတ်ထဲ တွင် လည်း CC ကလေး ၆ တန်းကျောင်းသူ အရွယ်လောက် ကတဲက AA တို့ အိမ် ကို ဝင်ထွက်သွားလာ နေခဲ့သည် ကို ပြန်သတိရလာသည် ။ ထိုစဉ် က M သည် မန်းတလေး တွင် အိမ်ပိုင် ရယ်လို့ မရှိသေး ။ အမျိုးတစ်ယောက် အိမ်တွင် ကပ်နေရင်း လျှပ်စစ် ပစ္စည်းလိုင်းထဲ စဝင်ကာစ ။ စလှုပ်ရှား ရုန်းကန် ကာစ အချိန် ။ ဘာမှ သိပ်မသိ နားမလည်သေးသူ M ကို AA နှင့် BB တို့ လင်မယား က သူတို့ တတ်သလောက် လမ်းညွှန်ပြခဲ့သည် ။ AA တို့ အိမ်သည် စားအိမ်သောက်အိမ် ဖြစ်ခဲ့သလို CC့ကိုလည်း ထိန်းကျောင်း ခဲ့သည် ။ CC သည် M ၏ မျက်စိရှေ့ လက်ပေါ်တွင် ကြီးပြင်းလာသူလေး ။ သူလေး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ ရုပ်တူ တဲ့ တစ်ခြား တစ်ယောက် ဖြစ်မှာပါ ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ကာ M တစ်ယောက် ကွန်ပျူတာကို ပိတ်လိုက်သည် ။
“ ကျွန်တော် တို့ စက်ရုံက စီစဉ်ထားတာ က ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အကြီးစား ဖောက်သည်ကြီး တွေ ဖြစ်တဲ့ M ၊ T နဲ့ Z တို့ ကို ထိုင်း ဖူးခက် ကို ၄ ရက် စင်္ကာပူ ကို ၄ ရက် ၊ ပြီးမှ ကျွန်တော်တို့ တရုတ်ပြည် နေရာအနှံ့လေ့လာရေး ပို့ ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ် ” တရုတ်ပြည် စက်ရုံသူဌေး ၏ လူယုံ ရောက်လာပြီး M တို့ ကို အစီအစဉ် ပြောပြသည် ။ မန်းတလေး တွင် သူဌေး၏ လူယုံ နှင့် M,T,Z တို့ တွေ့ ဆုံနေကြခြင်း ဖြစ်သည် ။ သုံးဦးစလုံး ယောက်ျား များ ဖြစ်ပြီး T နှင့် Z တို့ က အသက် ၅၀ ကျော် များ ဖြစ်သည် ။ သူဌေး ၏ လူယုံ မှာ အသက် ၃၀ ကျော် ၊ M နှင့် အသက်သိပ်မကွာပဲ ဘာသာစကား ၅ မျိုးခန့် တတ်ကျွမ်းသည် ဟု သိရသည် ။ ယခု ခရီးစဉ်တွင် သူ က လမ်းပြ ၊ ဘာသာပြန် ၊ စပွန်ဆာ ။
“ ဟုတ်ကဲ့ … ကောင်းပါတယ် ။ အရမ်း ပျော်ဖို့ ကောင်းမှာပါ ။ ကျုပ်တို့ လည်း အခု ခင်ဗျား တို့ စီစဉ်ပေးတော့ အလုပ်က နေ စိတ်ပြေလက်ပျောက် အပန်းပြေ ခရီး ထွက်ရတာပေါ့ ။ နို့ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ဆို ထွက်ဖြစ် မှာ မဟုတ်ဘူး ။ နော… မဟုတ်လား မောင်M ရေ…. ဟားဟားဟားဟား ”
T က ဝင်ဖောက်လိုက်သဖြင့် အားလုံး ရယ်ရယ်မောမော ဖြစ်သွားကြသည် ။ သို့ နှင့် ၄ ယောက်သား ရန်ကုန် လေဆိပ် မှ ထွက်ခွါ လာခဲ့ကြသည် ။ ပထမဦးစွာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခက် ကမ်းခြေ ဆီသို့။ ၄ ဦးသား ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် နှင့် စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပျော်ပါးကြသည် ။ ထိုင်းနိုင်ငံ ရှိ ကြည်ညို ဖွယ်ရာ မြဘုရား ကို လည်း သွားရောက် ဖူးမျှော် ကြည်ညို ခဲ့ကြသည် ။ နာမည်ကျော် ပတ္တရား သို့ လည်း ခြေရာချ ခဲ့ကြသည် ။ ရေချိန်းခန်း ဆီ များသို့ လည်း ရောက်ခဲ့သည် ။ ယောက်ျားသားများ ချည်း ဖြစ်သဖြင့် သွားရလာရတာ အဆင်ပြေသည် ။ ထိုင်းတွင် ၅ ည အိပ် ၄ ရက် နေပြီး စင်ကာပူ သို့ ခရီးဆက်ခဲ့ကြသည် ။ စင်ကာပူ သို့ ရောက်ပြီး ဒုတိယ ရက် ၊5star အဆင့်ရှိ ဟိုတယ်ကြီး ထဲ တွင် အားလုံး နားနေကြစဉ် သူဌေးလူယုံ က စကားစ လာသည် ။ M က လက်တော့လေး ကို ထုတ် အင်တာနက် သုံးရင်း ကြည့်ခဲ့ဖူးသော စင်္ကာပူ မော်ဒယ် လေးများ ၏ ပုံများကို ပြန်ကြည့်နေစဉ် ဖြစ်သည် ။
“ ဒီနေ့ ည အထူးအစီအစဉ် အဖြစ် စင်္ကာပူ မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကျောင်းသူ အရွယ် ကောင်မလေး တွေ ရဲ့ sexy dance နဲ့ ခင်ဗျား တို့ ကို ဖျော်ဖြေ ပေးမှာ ဖြစ်တယ် ”
ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်း…………………. M,T,Z သုံးဦးသား လက်ခုတ်တီး အားပေးလိုက်ကြသည် ။ သို့ နှင့် ၄ ယောက် လုံး အပြင်အလည် အပတ် ထွက်အပြီး ဟိုတယ် သို့ ပြန်လာကာ စောင့်နေကြသည် ။ ၇ နာရီ ခန့် တွင် သူဌေးလူယုံ က အခန်းတွင်း ရှိ မီးများ ကို ပိတ်လိုက်ပြီး အသင့်စီစဉ်ထားသော စလိုက်မီးသေး လေးများ နှင့် ဒစ်စကို မီး များ ကို ထွန်းလိုက်သည် ။ အခန်း တံခါး ပွင့်သွားကာ ကောင်မလေး ၄ ယောက် ဝင်လာသည် ။ ဒစ်စကို နှင့် စပေါ့ မီး များ အောက်တွင် မို့ ရုပ်ကို မူ သေချာစွာ မမြင်ရ ။ ရင်သပ်ရှုမော စရာ အရမ်းကောင်းလောက်အောင် ကပြကြလေသည် ။ နောက်မှ ဖွင့်ထားသော တီးလုံး အမြူး များ က လည်း အရမ်းလန်းနေသည် ။ M,T,Z နှင့် သူဌေးလူယုံ တို့ က တော့ ဘီယာ ၊ ဝီစကီ သောက်ရင်း ကမ္ဘာ သစ် ထဲ သို့ ရောက်နေကြသည် ။ တစ်ချက်ချက် ကောင်မလေး များ က သူတို့ အနား သို့ လာရောက် ကာ ကပ်သီပွတ်သီ နှင့် ကပြသေးသည် ။ Z တစ်ယောက် က စိတ်အကြွကြီး ကြွ ကာ သူဌေး လူယုံ အနီးသို့ ကပ်ကာ မေးလိုက်သည် ။
“ ဒီကလေးမ လေး တွေ ကို ဒီည ခေါ်လို့ ရမလား ဗျ ”
“ ရမှာပါ ၊ ကို Z က စိတ်အရမ်း ဝင်စားနေပြီ ထင်တယ် ”
“ ဟားဟား .. အိမ်က မယားကြီး နဲ့ ဝေးတုန်းလေး ကဲရတာပါဗျာ ဟားဟား ။ ဒါဆို ခင်ဗျား ပြီးရင် စီစဉ်လိုက်တော့ နော် ။ ဒီအတွက် စရိတ် ကို ကျုပ် က အားလုံးအတွက် ပေးပါ့မယ် ”
တစ်နာရီ ခန့် ကပြ ပြီး ၊ နဂို မီးများ ပြန်ဖွင့်လိုက်သော အခါ ကောင်မလေး များ ၏ ရုပ်သွင် များကို သေချာမြင်ရတော့သည် ။
“ ဟာ CC …. နင်..နင် ”
“ ဟင် ဦး……. ”
ယမကာ အနည်းငယ်သောက်ထားသဖြင့် တက်ကြွယစ်မူး နေသော Z က ထ လာပြီး CC လက်ကို ဆွဲ လိုက်သည် ။ပြီတီတီ မျက်နှာကြီး ဖြင့်
“ ဒီကောင်မလေး ကို ကျုပ် ခေါ်မယ်နော် ကို M ရေ ၊ စောန က သူလေး ကျုပ်နား လာ က ကတည်းက ကျုပ် က အရမ်းစိတ်ဝင်စားနေတာဗျ ၊ ဗမာ မ လေး ဆိုတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ ဗျာ … ဟားဟား ”
ထောင်းခနဲ ဒေါသဖြစ်သွားသော M သည် Z ကို ဆောင့်တွန်းလိုက်ကာ CC ကို ပြန်ဆွဲ ခေါ်လိုက်သည် ။
“ ဟေ့လူ ဘာလုပ်တာလဲ ၊ ဒါ ကျုပ်မိတ်ဆွေ ရဲ့ သမီးဗျ ။ ငယ်ငယ်လေး က တည်း က ကျုပ် ထိန်းကျောင်းလာတာ ၊ ဒီမှာ ကျောင်းတက်ဖို့ လွှတ်ထားတာ ။ ခင်ဗျား မမိုက်ရိုင်းနဲ့”
“ ဟေ့ကောင်… ၊ သူ့ ဘာသာ သူ ဘာဖြစ်ဖြစ် ၊ ဒီအခန်း ထဲ ကို လာတာ က ငါတို့ ကို ဒီည လာ ပြီး _ံတာ ကွ ၊ မင်း က သာ မခုတ်တတ်တဲ့ကြောင် လို ( မခုတ်တတ်သောကြောင် = ဗမာ လက်သုံးစကား ဖြစ်ပါသည် ။ ဂေဇက် ထဲ ရှိ ကိုကြောင်ကြီး မဟုတ်ပါ ) မုံလာဥ မလုပ်နဲ့ ” ဟု ဆိုကာ လဲကျသွားရာ မှ ပြန်ထ လာသော Z သည် M ကို ပြန် ထိုး ရန် ပြေးလာသဖြင့် T နှင့် သူဌေးလူယုံ တို့ က မနည်း ဝင်ဆွဲ ရသည် ။ ကျန်ကောင်မလေး များက တော့ အံ့သြ တကြီး နဲ့ကြည့်နေကြသည် ။ CC တစ်ယောက် M ၏ ပခုံး ပေါ်တွင် တရှုံ့ ရှုံ့ ငိုနေသည် ။ M သည် သူ ဌေး လူယုံ ကို ခေါ်ပြီး CC နှင့် သူ ဘယ်လို ပတ်သက်ပုံ ကို ရှင်းပြ ကာ နောက်နေ့ မြန်မာပြည် သို့ ပြန်ဖို့ လက်မှတ် ၂ စောင် စီစဉ်ပေးရန် အကူအညီ တောင်း လိုက်သည် ။ ထို့ အပြင် ဟိုတယ် အခန်း တစ်ခန်း စီထပ်ယူ ခိုင်းလိုက်ပြီး CC ကို ခေါ်ကာ ထွက်ခွါလာခဲ့သည် ။ တစ်ညလုံး CC ကို မေးမြန်း ပြောဆို ဆုံးမ နေခဲ့သည် ။ CC စင်ကာပူ သို့ ရောက်ပြီး သကာလ မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ အတူပေါင်းခဲ့သော အပေါင်းအသင်းများ နှင့် ပြန်တွေ့ ကာ အလွန်ပျော်ခဲ့ကြောင်း ၊ ဟိုဒီ ဆို သွားလိုက် ၊ ကလပ် ဆိုလည်း တက်လိုက် နှင့် ကျောင်းစာ ဘက် ကို လုံးဝ လစ်ဟင်းခဲ့သည် ။ စာမေးပွဲ တိုင်းလည်း ကျရှုံးခဲ့သည် ။ ကြာတော့ စာဘက် ကို လုံးဝ စိတ်မပါတော့ ကာ အပြင်တွင် လည်ပတ် ပျော်ပါး တေလေ နေသည် ။ မိဘ များကို မူ ကျောင်းတက် နေဆဲ ဟု လိမ်ထားခဲ့ကာ ကျောင်းစရိတ်များ လိမ်ညာ တောင်းခဲ့သည် ။ ကျောင်းစရိတ် ရောက်လာချိန်တွင် စားဝတ်နေရေး ခဏတာ ပြေလည် သော်လည်း ။ ပိုက်ဆံ ပြတ်လပ် ချိန် များ တွင်မူ ယခု ကဲ့သို့ လိုက်လံ ကပြ ခြင်းဖြင့် ပိုက်ဆံ ရှာနေကြောင်း ။ _ာသည် အဖြစ်မျိုး လုံးဝ အဖြစ်မခံ ခဲ့ကြောင်း ။ ယနေ့ တွင်မှ ယခု ကဲ့သို့ အဖြစ်မျိုး တွေ့ ကြုံ ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ငိုယို ရှင်းပြသည် ။ M လည်း စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာ ဖြစ်သွားသည် ။ AA နှင့် BB တို့ လင်မယား ၏ စီးပွား ကျ ဆင်းနေသည့် အခြေအနေ ဆိုးကို လည်း CC ကို မပြောပြ ရက် ။ သူ့ ပိုက်ဆံ ချေးပေးထားသည့် ကိစ္စများ ၊ AA က တိုက်၊ ကား များ သူ့ ထံ တွင် ပေါင်ထားသည့် ကိစ္စ များ ကို လည်း ပြောမထွက် ။ CC ကို သူ စတွေ့ ချိန် က CC သည် ၆ တန်းကျောင်းသူ အရွယ် ငချွတ်မလေး ။ ယခု သူ့ ရှေ့ တွင် ရှိနေသော CC သည် အရွယ်ရောက် ခေတ်လွန် သမီးပျို လေး ။ CC မျက်နှာလေး ကို ကြည့်လိုက်တော့ အရမ်းချောမော လှပနေသည် ကို တွေ့ရသည် ။
“ မနက်ဖန် ဦး နဲ့ အတူ မြန်မာနိုင်ငံ ကို ပြန်ရမယ် ။ ဟိုရောက်ရင် ကိုAA တို့ ကို ဦး ရှင်းမယ် ။ CC့ ကို ဒီမှာ ဆက်ပြီး ဒီလို နေတာကို ဦး ဘယ်လို မှ ခွင့်မပြု နိုင်ဘူး ၊ ဟိုကျရင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ဦးစီစဉ် မယ် ”
သို့ နှင့် ….မည်သို့ မည်ပုံ လုပ်ရမည် ကို M တစ်ယောက် စဉ်းစားနေရင်း CC ကို အိပ်ခိုင်းလိုက်သည် ။ နောက်နေ့ အရောက်တွင် CC နှင့် M တို့ သည် သူဌေး လူယုံ အစီအစဉ် ဖြင့် စင်္ကာပူ မှ ပြန်လာခဲ့ကြသည် ။ မန်းတလး သို့ အရောက် တွင် M နှင့် AA တို့ လင်မယား အကြီးအကျယ် တိုင်ပင် ကြသည် ။ AA တို့ လင်မယား သည် M ထံ တွင် ပေါင်နှံ ထားသော တိုက်နှင့် ကား တို့ ကို ပြန်မရွေးနိုင်တော့ သဖြင့် ငွေပြန်အမ်း ရန် ပြောလာသည် ။ ထိုကိစ္စ ကို ခဏမေ့ထားပါ ဟု ပြောပြီး CC အကြောင်း ကို တိုင်ပင် ရသည် ။ စင်္ကာပူ ရှိ ဖြစ်ခဲ့သည် များ ကို ပြန်မပြောပဲ ။ CC အနေဖြင့် ကျောင်းတက်ရန် မပျော်တော့ သဖြင့် ဒီမှာပဲ ထားရန် ။ အားလုံးကို M ကူညီပေးမည် ဟု ပြောသည် ။ ထို့ အပြင် သူ့ အနေဖြင့် CC ကို သားမှတ်မှတ် မယားမှတ်မှတ် ရိုးမြေကျ ပေါင်းသင်း သွားပါရစေ ဟု မိဘနှစ်ဦး ဖြစ်သူ AA နှင့် BB တို့ ထံ ခွင့်ပန် လိုက်သည် ။ ငွေရေးကြေးရေး ကိစ္စကို လုံး ဝ မေ့ထားရန် ကို အထပ်ထပ်ပြောသည် ။ CC ကို စွဲလန်းမြတ်နိုးမိသဖြင့် ယခု ကဲ့သို့ ခွင့်တောင်း စီစဉ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နားလည်အောင် ပြောပြ လိုက်သည် ။ AA နှင့် BB တို့ က သမီးသဘော ကို မေးကြည့်ပါဦးမည် ဟု မယုတ်မလွန်ပြန်ဖြေသည် ။ AA က M ကို ခေါ်ပြီး ယောက်ျားချင်း စကားပြောချင်သည် ဟု ဆိုလာသဖြင့် AA ကို ခေါ်ကာ စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင် သို့ ထွက်လာခဲ့သည် ။
“ ကဲ…ကိုM ရေ ၊ မင်းအနေ နဲ့ စင်္ကာပူ မှာ CC ကို ဘယ်လို ပုံစံ တွေ တွေ့ ခဲ့သလဲ ဆိုတာ အကို့ ကို ပြောပြ ပါဦး ၊ ဘာမှ ချန်မထားပါနဲ့ ။ အကို လည်း ရိပ်မိပါတယ် ၊ သမီး ဆိုးပုံအကြောင်းတွေ ကို ”
AA က ဖွင့်ဆိုလာသဖြင့် M က အကြောင်းစုံကို ရှင်းလင်းပြောလိုက်ရတော့သည် ။ သို့ သော် CC ကို မူ ငယ်စဉ်ကတဲ က လက်ပေါ်တွင် ကြီးပြင်းလာသည် မှာ မှန်သော်လည်း ၊ ယနေ့ တွင် မူ စွဲလန်းမြတ်နိုးမိသွားသဖြင့် တောင်းရမ်း မိခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း ကိုပါ ပြောသည် ။ သူ့ အနေဖြင့် ကိုAA တို့ ၏ အကြွေးများကို အားလုံး ချေပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး AA တို့ လုပ်ငန်း ကို သူ ငွေထည့်ဝင်ကာ ဆက်လက်ဦးစီးသွားမည် ဟု သူ့ အစီအစဉ် ကို ပြောလိုက်သည် ။ AA သည် မျက်ရည်များ လည် နေကာ M ၏ လက်နှစ်ဘက် ကို ဆုတ်ကိုင် လိုက်ပြီး
“ ညီလေး M ရယ် ၊ ညီလေး ကို အကိုတို့ မိသားစု အနေ နဲ့ ဘယ်လို ကျေးဇူးတင်စကား ဆိုရမလဲ မသိတော့ပါဘူး ကွာ ၊ အကို့ မိန်းမ ချဲဂျပိုး မ ကို လည်း ဒီအကြောင်းတွေ အကုန် ပြောပြ လိုက်ပါ့မယ် ကွာ ။ သူလည်း နောင်တ ရသင့်ပါပြီ ၊ CC့ ကို လည်း မင်းလက်ထဲ ယုံကြည် စိတ်ချ စွာနဲ့ အပ်ပါ့မယ်ကွာ ။ CC့ ကို အကောင်းဆုံး နားလည်ပေးနိုင်မှာ က မင်း တစ်ယောက် ပဲ ရှိမှာပါပဲ …. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လေ မင်း ဟာ အကိုတို့ သားမက် ရယ်လို ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပေမယ့် မင်းဟာ အကို တို့ မိသားစု ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကြီး ဆိုတာ အကိုတို့ဘယ်တော့ မှ မမေ့ပါဘူး ကွာ ”
“ ဟာ….အဲ့လို ကျေးဇူးရှင်ကြီး တော့ မလုပ်ပါနဲ့ ၊ ရပါတယ် ဗျာ ၊ အကို နဲ့ ကျွန်တော် နဲ့ က နောက်ပိုင်း သားမက် နဲ့ ယောက်ခထီး ဖြစ်လာတော့မှာပဲ ၊ လာဗျာ ၊ ဘဝ ရဲ့ အခက်အခဲ တွေ ကို အတူရင်ဆိုင် ကျော်လွှားကြတာပေါ့ ၊ ကျွန်တော် တို့ အားလုံး…….Cheers !! ”
( ကိုယ့်အကူအညီ လိုအပ်နေသူ ကို စေတနာသန့် သန့် နဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်း ဟာ စိတ်ပျော်ရွှင် ချမ်းသာရာ ရောက်ခြင်း တစ်ပါး မဟုတ်ပါပေလား ။ )
ကိုယ်တိုင် စဉ်းစား စိတ်ကူး ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံ ပါသည် ။ ဇါတ်ကောင် များ ကို အင်းဂလိ အက္ခရာ များ ပေးထားခြင်းကို မူ သည်းခံ ခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါ ရန် ။
တိုတို ပေ သဂျီး က comment ကို + ဂျီပဲ ပေးပြီး မထားခဲ့ နဲ့တဲ့ forum ထဲမှာ ပြောထား တယ်
ကျန်တဲ့ နေရာတွေ မှာ ထက်ပေးနေမှာ စိုးလို့ ဒီမှာ ပြောလိုက် နော်
happy ending ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ စာလေးတပုဒ်ပေါ့ဗျာ။ နောက်ဆုံးကြမှ အင်ကြီးတကယ်ဟုတ်ဖူးဆိုတော့ နင်သွားတယ်။ M အတွက် ကြောင်ကြီးက ဝမ်းသာပေးမလို့….
ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ် ဝတ္ထုတိုတပုဒ်ကို ကြုံလို့ဖောက်သည်ချချင်တယ်။ အင်လား အွန်လားတော့ မသိဘူး။ ဝတ္ထုအစမှာ ဇာတ်ကောင်က လူပျိုလူလွတ် ချစ်သူပစ်သွားတာ အသားလွတ်ခံခဲ့ရသူ။ တနေ့ကြတော့ သူငယ်ချင်းတွေက လူစုံလို့သောက်စားကြတုန်း နာမည်ကြီးတဲ့ ဇယားလေးတပွေခေါ်လိုက်တယ်။ အားလုံးဝိုင်းအားပေးကြမယ်ပေါ့။ အဲဒီဇယားလေးက ဇာတ်ကောင်ရဲ့ ရည်းစားဟောင်းဖြစ်နေတယ်။ ပွဲမဖြစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်၊ ဟာခနဲ ဟင်ခနဲဖြစ်၊ အချင်းချင်းပြသနာတက်ကြသလား မမှတ်မိတော့ဘူး။ ကောင်မလေးက ငိုပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်။ အကြောင်းစုံကိုလိုက်မေးကြည့်တော့ သူ့ပထွေးက ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်။ နောက်ထပ် အတွေ့မခံတော့ဘဲ ခြေရာဖျောက်သွားတယ်၊ ကြေကွဲစရာ အဆုံးသတ်လေးပေါ့။
ဖတ်လိုက်တော့ A,B,C မေ့နေတာ ပြန်လည် မှတ်မိသွားစေပါတယ်။
နာမည်လေး နံစားသုံးပါလားဗျာ ဒါမှ ဖတ်ရတာ ဇာတ်ရည်လည်မှာပေါ့ ။ နံစားသုံးထားတာတွေမို့လို့ နားလည်အောင် နှစ်ခါ ပြန်ဖတ်ရတယ်